Ahoana no fomba hahatonga ny daty sy ny mbola manam-bola no manasa lamba?
sary avy RBerteig CC
Izany no olana maika sy ny tolona ho an'ny mpianatra rehetra ny fianarana ambony izao tontolo izao. Ity herinandro lasa zara raha manam-bola azoko ny tena nila trano fidiovana taratasy, ary ny fiankinan-doha dia nandrahona kafe ny hamongotra ny kitapom-batsy. Na izany aza, tahaka ny tsy hialàna foana ny ilana ny kafeinina, mpianatra tsy afa-mandositra ny hoe ry zareo Nopotehina.
Ny fiainana ao amin'ny teti-bola ny mpianatra dia tsy mora. Na dia manana anjara asa amin'ny fotoana iray, na dia ny tsara vintana vitsivitsy izay manana ray aman-dreniny 'ny fanohanana ara-bola, fa mbola mitohy ny ady. Zoma alina manohitra mafy ny pizza dia ampy, fa ny manao ratsy raharaha, misy singa hafa izany hita eo amin'ny kolejy sy anjerimanontolo rehetra; mampiaraka.
Na dia eo aza ny mpiaro sy ny tsy mampino hatsaran-tarehy, hampiaiky volana ny daty Ho anao ny sasany matetika lafo koba. Na izany aza, misy mazava amin'ny faran'ny tionelina ny lafo. Izany ny andro tsara vintana, satria ireo zava-miafina telo afaka manampy anao hampiaiky volana ny daty maha-mpianatra Nopotehina.
Manakaikeza ny an-trano ... tahaka ny tena akaiky
sary avy Steve Jurvetson CC
College dia ny an-trano ao an-trano. Raha ny marina, izany angamba voly kokoa noho ny tena an-trano. Ary noho izany ianao sy ny tombontsoa maro daty mety hevitra tsara amin'ny ny fingertips.
Ny sarimihetsika alina sy ny filaminana eo amin'ny sakafo. Netflix i natao ho ara-bakiteny amin'ny oniversite ankizy.
Cook miara- (Mbola zava-dehibe microwave mahandro sakafo!)
Miara-milalao milalao, karatra na lalao video
Manorena Fort bodofotsy miara-. Ny olon-drehetra ny zaza ao am-pony, tsy mandà izany
Fa ny kokoa artsy-fartsy mpivady, manao ny asa tanana, na nandoko miara-
Resaka tsotra fotsiny, ary matetika no manao fahagagana cuddling
Manaova teti-bola drafitra
sary avy Bill & Vicki T CC
Tsy mianatra ny zava-drehetra any an-dakilasy. Ny fahaiza-manao ny fandrafetana teti-bola dia, ary tena mahasoa sarobidy iray. Na dia tsy afaka mametraka azy eo amin'ny Resume dia hanampy anao ho marani-tsaina momba ny vola. Mipetraha, miala penina sy taratasy (na kokoa kosa amin'ny solosaina findainy) ary maminavina ny vola lany isam-bolana. Anisan'izany ny sakafo, fialam-boly, ilaina, fitaovam-pianarana, ary indrindra indrindra daty. Miezaha mametraka afa-tsy izay tsy afaka miaina raha tsy misy. Manaraka, manampy ny costys miaraka ary hahazo tanteraka ny vokatr'izany hatraiza ny mety lany isam-bolana. Tonga izao ny zava-tsarotra; miezaka tsy hita izany vola, ary na dia tsy mandany raha azo atao. Ankehitriny ianao dia afaka ny ho tena vehivavy tena tiany, mbola handoavana ny volavolan-dalàna, fa tsy mahatsapa tanteraka Nopotehina.
Ampiasao ny Resources
sary avy dougwoods CC
Ny lehibe indrindra dia ny loharanon-karena-pananana. I feo toy ny mangatsiaka filozofa tamin'ny tehina hazo sy ny volombava, nefa aho tsy. Amin'ny maha mpianatra ny ananantsika zavatra maro tombony. Fantatrareo ireo boky tapakila nahazo anao tamin'ny fiandohan'ny taona, ary tsy nisokatra nanomboka tamin'ny? Tsara, ry zareo feno vola ahitana faritra feno daty famonjena hevitra ... Mitandrema ny amin'ny discounted ireo tombokavatsa aza. Tsy nifarana hatreo. Na aiza na aiza ianao any an-tsekoly, Afaka manome toky anareo aho fa maro ny fivarotana, trano fisakafoanana sy ny orinasa manodidina ny toeram-pianarana mpianatra tolotra fihenam-bidy. Manararaotra ireo fahafahana sy hamonjy vola amin'ny fitaovam-pianarana, sakafo sy ny maro hafa. Tsy hita isa ireo efaha amin'ny isam-, bargains sy giveaways ho an'ny mpianatra fotsiny. Lasa vadin'ny mpanjaka, na ny mpanjaka tapakila dia tsy zavatra mba ho menatra amin'ny.
Miaraka amin 'ireo tsiambaratelo telo, ianao dia ho tsy azo sakanana. Afaka mandresy an'izao tontolo izao ny niaraka tamin'ny mora be, ary mbola vola ambiny mba haneho azy io. Ka handeha sy hisambotra fo ny sasany ary hamonjy ny sasany vola.